Kuningi kwenkolelo engaguqukiyo iza kanye esiyithandayo mayelana izinja noma amakati. Kodwa lokho izibalo uthi zonke lezi ubandlululo? Ingabe bonke abathandi inja kukhona aphumayo futhi enobungane ngempela? Futhi bonke labo abamthanda amakati, banesizungu, Hermits esithukuthele esabe ukuchitha sonke isikhathi sabo mahhala kuyi-Internet?
Facebook iqukethe ndathane idatha abantu ayizigidi ezingu-1.7 kusukela emhlabeni wonke. Lezi idatha zihlanganisa izintandokazi zabo ekuphileni, kusukela izithakazelo kanye akuthandayo ziphethe Umphakathi kanye nomndeni nomphakathi. Esikhathini esingeside esidlule, abacwaningi wanquma ukusebenzisa leli idatha ukuze uthole umqondo wokuthi sezizwe ngobukhulu emphakathini: umehluko phakathi abantu abathanda izinja namakati.
Abacwaningi ihlaziye amaphrofayli abantu abangaba yizinkulungwane ezingu-160 ngosizo intelligence yokufakelwa sokuqashelwa lezinto. Lokhu AI ekuqaleni eklanyelwe ukusiza abantu abayizimpumputhe ukusebenzisa Facebook. Software ukuqaphela isithombe futhi uchaze okuqukethwe kwayo Usebenzisa umbhalo-kuya-enkulumweni ezenzakalelayo. Lokhu intelligence yokufakelwa wakhetha izithombe ukuthi abasebenzisi, amakati ezazinemithetho ukuboniswa, izinja noma kokubili izilwane wabelane. Khona-ke, lezi idatha ziye zasetshenziswa ukuba uhlukanise abasebenzisi ngamaqembu amabili: abalandeli izinja noma amakati. Abacwaningi ke kuqhathaniswa ngayo ulwazi olunikezwa umsebenzisi ekhasini lakhe - izithombe, abangane kanye nemicimbi.
Okokuqala, abathandi inja bavame ukuba abangane abengeziwe. Amakhasimende embukisweni izithombe izinja zazinesilinganiso seminyaka abangane 26 kunokuthanda amakati. Nokho, abathandi cat ngokuvamile ababemenyelwe yimuphi umcimbi.
Endabeni a cat lover ubandlululo kanye eyeqisayo kancane baqinisekisa. Empeleni ngibabheka njengomndeni zazivame nesizungu. Mayelana 30% abasebenzisi ihlaziye bayathanda amakati, baba nesizungu, uma kuqhathaniswa namaphesenti angu-24% we-abathandi inja. Nokho, akubona bonke abantu abathanda cat - Isalukazi nesizungu. Ngokungafani engaguqukiyo, isizungu nothando namakati abanayo akuhlangene ne ubulili noma yobudala. Abesilisa abasha inombolo efanayo abalandeli zamakati, kanye phakathi kwabesifazane amadala owodwa.
idatha ihlaziye futhi asisiza ukuba sithole impendulo mayelana akuthandayo of iqembu ngalinye. Abacwaningi wasebenzisa ulwazi mayelana izincwadi, izinhlelo ze-TV namabhayisikobho ezwakala abasebenzisi. Ngokuvamile, ikati abantu prolaykali izincwadi ezengeziwe, izinhlelo ze-TV nama-movie kunabantu-inja. Abacwaningi bathi lokhu kubangwa iqiniso lokuthi yokugcina bakhetha a esebenzayo ngaphezulu. abathandi Cat Ubonisa isithakazelo ngaphezulu zenganekwane, anime kanye yesayensi, ayathanda "Pokemon," "Doctor Who," "Star Trek," "Dracula", "The Hobbit" futhi "Alien". Ngesikhathi esifanayo, abathandi inja uthanda melodrama, idrama kanye ngokoqobo kubonisa.
Abacwaningi baye alalelwa indlela abantu kuwo womabili la maqembu ukuveza imizwa yabo. Cat abantu bakwazi ukuveza ezahlukene ebanzi of imizwa ngesikhathi esisodwa, okungukuthi, injabulo, ukukhathala, intukuthelo enhliziyweni nokudabuka. Abantu, izinja bavame wokuvimba imizwelo yabo futhi ngokuvamile nokuningi ku-Facebook kuphela ukuveza nokuziqhenya nomdlandla.
Be Sad social network - basuke bekhalela usizo ngoba noma kuwumdlalo ongenangozi?
Ngubani Ivangay: esikoleni nezithombe usomabhizinisi abanekhono?
Isifo sobuhlungu obungapheliyo. Indlela yokwelapha ubuhlungu be-syndrome?
Iwayini Georgian Sibutsetelo
Uthando seluhambe, kanjani lokubuyisa, noma ukuthi ungenza kanjani umfazi oyedwa?